Amakhosikazi zombangazwe ezivelele kanye nosomabhizinisi, kanye ziye zaba nemiphumela ukuthandwa futhi wenze umsebenzi kwezinye izindawo abantu ngokuvamile ahlale ku ithunzi. On kubo kancane eyaziwa, akuvamile avele umphakathi bese uzama ukuhlala emthunzini abayeni babo. Nokho, ngokuvamile, impumelelo Engxenyeni yesibili kuthiwa ekufezeni ncamashi amakhosikazi Umlandvomphilo balaba besifazane bafanelwe akukho kancane, futhi ngezinye izikhathi ngisho umphakathi ngaphezulu.
Ngubani yena, umfazi wenye abantu abadumile kwenkathi?
Boris Berezovsky kade ephila ukuphila enothe. It kungenziwa ngokuthi omunye osopolitiki abadumile kakhulu nosomabhizinisi besikhathi sethu. Igama lakhe kuzwakele kubo bonke, kodwa ngomfazi Berezovsky Elena Gorbunova cishe njalo wahlala emthunzini umyeni wakhe odumile. Ungubani lona wesifazane? Yini eye yabakhanga ebona usomabhizinisi ubuhle besifazane futhi nendima eyadlalwa ekuphileni kwakhe, kanye ukwenza lokho namuhla? Lokhu uyofunda kulesi sihloko.
umkhaya ovamile Soviet
Elena Gorbunova wazalwa ngo 1967 eMoscow, futhi umkhaya ngasekuqaleni 70 babehlala esitezi yesithathu elinezitezi ezinhlanu izakhiwo sha, okwakhiwa kuso edolobhaneni Raven kwisayithi ye kudilizwe agugile maqhugwane lokhuni. Kwakuwusuku umndeni Soviet abavamile kakhulu - kwabazali nezingane ezimbili. Ubaba wayesazisa kakhulu isikhundla unjiniyela epulazini wendawo, umama wasebenza njengomgcini wamabhuku ezimali ngesikhathi creamery. Lapha e esikoleni sendawo iziqu Elena Gorbunova. Biography amantombazane lutho ekhethekile alihlukile. Ngokwe othisha, it is zihlukaniswa friendly, neqondayo futhi mhlawumbe ngisho kancane nezimfihlo nemvelo. Phakathi ofunda akekho wama phandle, nazo zonke izisekelo ncamashi ubungane. Umngani abaseduze ntombazane njalo wayenomfowabo Alyosha. Naphezu kweqiniso lokuthi izinhlamvu zezingane zicishe iphambene, ke ayiwathiyi ukuzwana futhi baqonde nomunye.
izitatimende ngokuqapha Engenakuqondakala
Ofunda nabo yazwakalisa ukukhathazeka Yelena izibambe omuhle, kodwa kakhulu ngokuqapha. Yena cishe, nginezinkumbulo ezinhle iminyaka zisesikoleni. Ngemva kwalokho, yena ngokuzimisela basabela esicelweni wokuPhathwa futhi ngokuphindaphindiwe basiza esikoleni bomdabu.
ubuhle bemvelo yaba nemiphumela emihle
Ngemva kokuqeda esikoleni, waya eMoscow ukukwenza. Ngaba umfundi we-Institute of Management. Wafunda aphakathi nendawo, kodwa ngaso sonke isikhathi wazama ukubheka umbukwane, okwasiza kakhulu ubuhle bemvelo. Ukuba umfundi unyaka wokuqala, uLena yayisiboshwe kaningi kubonakala ubudlelwano nabantu bakwamanye amazwe. Kwaba yisikhathi soshintsho isiphetho intombazane yesifundazwe. Ukuze ugweme emphakathini mayelana nokuziphatha kwabo kalula, kube-KGB. Elikhangayo, sociability kanye intelligence yemvelo bavunyelwe kalula ukwenza ajwayelane abantu of interest iziphathimandla.
Ngakho Yelena wahlangana komyeni wakhe wokuqala, aziwa isikhathi wemidlalo Mikhail Shatrov. Indlu Shatrova ngokuvamile bahlangana abaculi - abalobi, abaculi, nabaqondisi, abadlali. Ukudlala indima umngenisi wezihambi friendly, uLena walalela ngokucophelela izingxoxo, walihudulela emhlabathini ulwazi olufanele, okuyinto ngokushesha badlula ku-KGB. Emshadweni, lo mbhangqwana wahlala kancane kuka kwezinsuku eziyishumi, ngakho wakwazi ukufunda kancane.
Ngemva kwalokho Yelena isitshalo "ezidingekayo" uthando, it is ngokuvamile kubonakala inkampani izintatheli ovelele, abalobi - akumangalisi ukuthi intsha kusuka imvelo yomfundi, wamane abazange bakuqaphele. Elena Gorbunova, isithombe okuyinto namanje nesiteleka uqaphele, sengathi wayazi ukuthi wadalwa ngaphezulu.
Umhlangano owashintsha ukuphila
Njengoba isikhathi siqhubeka, kwaba akakude pre-diploma umkhuba. Izimo zase yokuthi lo mkhuba wawenziwa Elena "LogoVAZ". Uyithola kanjani ukwazi Berezovsky no-Elena Gorbunova, kuze kube yilolu suku akwaziwa, kodwa isihloko ikusasa iphrojekthi idiploma liphakanyiswe wakhe igama Boris Abramovich. Khona-ke kwaba khona uhambo ilunga Italy ...
blonde abasesitelekeni kanye oligarch
Iphuzu kokuqala kwaba umhlangano esingayilindele Bolshoi Theatre omunye undunankulu. Yashaya blonde won oligarch.
Uma sicabangela iqiniso lokuthi Berezovsky ithathé isinyathelo njalo babe nodlame futhi ngokushesha, futhi Elena kakhulu ayazise ukuphila okunethezekile futhi ngezipho ezibizayo ukusho ukuthi usathandana lwalulude, ngeke usebenze.
Emkhayeni, Yelena wayeqaphile, unkosikazi okhathalelayo, okuyinto Yiqiniso, njengo Boris Abramovich. Ngemva konyaka babenesifiso Arina futhi ngemva konyaka - Gleb.
Berezovsky wayephana nezihlobo yomkakhe. Ubabezala noninazala uye wakha indlu enezitezi ezintathu, abathuthela kulo kusukela emithathu egumbini labo efulethini. Alex wafundiswa ummeli e-University of Leningrad, wabuyela eMoscow yalungisa efulethini zikanokusho, okuyinto ku Frunze Embankment.
izimo ngokuhamba kwesikhathi ukuphoqa Berezovskys umndeni ukuya e-England, bafike bazinza edolobheni elingasenyakatho yeLondon. Elena Gorbunova, biography okuyinto bavamise ukubonakala njengalokhu okulandelayo ulwazi unkosikazi wesithathu futhi lokugcina tycoon oshonile, empeleni ngempela owesifazane oludonsa, futhi ngokwalo Kuyathakazelisa umphakathi hhayi nje njengomuntu ongumama wezingane ezimbili, kodwa futhi njengoba eqashelwayo grande ukuzila. It njalo ikhanga labo abaseduze ukubukeka kwakhe lihle, ikhono ukunikeza umbono emphakathini.
Igama nesithombe nomfazi wesithathu oligarch Berezovsky uvele nabezindaba ngemva ngehlazo London, eyayinesihloko baseRussia Roman Abramovich futhi Boris Berezovsky. Elena Gorbunova uvele zomphakathi njengomvikeli omkayo icala civil phambi kweNkantolo YaseRoma Abramovich amacala amacala. ubufakazi bakhe ngezindlela eziningi wadlala indima juqu kule eziyinkimbinkimbi umbango Billionaire Abramovich futhi Berezovsky, le oligarch.
Lapha futhi kwakukhona ngxabano ngeziphansi phakathi abangane abathintekayo kuleli cala. Kufanele kuqashelwe ukuthi ukunambitheka lihle, ikhono ngokuziphatha kahle kuye ngokuthi isimo futhi intelligence yemvelo nomthelela yokuthi ukunqoba olungenamkhawulo phezu Elena. Yilokho okuthakazelisayo, kungakhathaliseki ukuthi ungakanani yakhe, ubukeka Elena Gorbunova. unkosikazi Berezovsky sika, usuku lokuzalwa okuyinto, ngokungafani izintokazi zomphakathi eziningi, hhayi kufihlwe, ngokuvamile kubangela nomona ukububula abesifazane abasebasha.
Ubufakazi bakhe is ngokungaqondile osolwa Abramovich ka imiqulu, okwaholela kokuhlolisisa ngaphezulu icala.
I ukungathembeki yomyeni wakhe buhlungu
Kodwa ukubonga komyeni wakhe kwaba yinto yesikhashana, Elena wezwa ngalesi ukungathembeki umngane womshado. owesifazane edelelwa ucele wokugcinwa izingane amakhilogremu ayizigidi ezinhlanu lo yokudayisa emzini wabo Surrey eningizimu-ntshonalanga yeNgilandi. Kodwa imali angizange ngisithole. Njengoba zonke ukuqhutshwa waya angabuyisela izikweletu Borisa Abramovicha Berezovskogo. Wesaba ukuba nesimo esinzima kwezezimali, Elena Gorbunova lethulwa ezithebeni zenkantolo, lapho ku isiphakamiso komunye wabahluleli bakwa eNkantolo eNkulu, kwanqunywa ukuba iqhwa esingamakhilogremu angaba yizigidi ezingu-200 ama-asset ayo ukuze kuqinisekiswe ukuphila okunethezekile Eleny Gorbunovoy nezingane zakhe. Ngakho-ke yafinyelelwa omunye ukunqoba lo wesifazane.
Kulesi sihloko, ubungezwa ukuthi umka-Boris Berezovsky, Elena Gorbunova ufanelwe ukuqashelwa hhayi kuphela njengoba unkosikazi lokugcina oligarch futhi ongumama wezingane zakhe ezimbili, kodwa futhi njengoba owesifazane umlando nzima zokuphila. Bawela bukhona ngezilingo yodwa qinisa amandla umoya, futhi izuzwe kakhulu.
Malik Gysin: Biography, izici imisebenzi kanye amaqiniso athakazelisayo
Alen Halilovic - inkanyezi liphakama European football emkhathini
Five amabhayisikobho engcono ngu Fatih Akin